Al-Shabaab oo 45-maalin u qabtay Ergadii soo xulay Xildhibaanada DF iney isku soo diiwaan geliyaan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Al-Shabaab oo 45-maalin u qabtay Ergadii soo xulay Xildhibaanada DF iney isku...
Al-Shabaab oo 45-maalin u qabtay Ergadii soo xulay Xildhibaanada DF iney isku soo diiwaan geliyaan
War ka soo baxaya Hoggaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baaq loogu diray Odayaashii ergada ahaa ee soo xulay baarlamaanka dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Bayaankan oo ku qornaa luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka ayaa lagu sheegay in Odayaashu ay ku dheceen “Fal gaalnimo ah”, lagana doonayo in ay ka berii noqdaan ficilka ay ku dheceen,sida lagu sheegay warka Al-Shabaab.
Waxaa loo qabtay muddo 45 maalmood oo ka bilaabaneysa 15-07-2019 kuna eg 01-09-2019-ka, iyagoona lagula taliyay in ay iska diiwaan geliyaan maamullada Gobolada dalka (Wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya).
Al-Shabaab waxay ku hanjabtay in Odeygii ka faa’ideysan waaya baaqa ay marin doonaan shareecada islaamka
Al-Shabaab ayaa inta badan beegsata Ergadii soo xushay Xildhibaanada Dowladda Federaalka Soomaaliya,kuwaasi oo qaarkood la dilay halka kuwo ay cabsi ku joog yihiin.
Xildhibaan Afaraale oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa dhowaan sheegay iney Al-Shabaab u yeereen ergadii soo dooratay,islamarkaana hadda ku sugan yihiin qaar ka mid ah deegaanada Al-Shabaab gacanta ku hayaan.
arrintaan ayaa wel wel hor leh ku abuureysa Odayaasha Ergada ahaa ee soo xulay Baarlamaanka Soomaaliya iyo kuw maamul Goboleedyada.